Toerana tsara indrindra hahitana modely fanontana 3D | Famoronana an-tserasera
Ny fanontana 3D dia saha vaovao iray tetikasa famolavolana telo refy adika amin'ny tontolo tena izy ireo miaraka amin'ny fanampian'ny mpanonta manokana.
Ity sehatry ny famolavolana taonjato faha-3 ity dia nanjary nalaza isan'andro isan'andro satria ny mpanonta printy 3D dia nanjary azon'ny mpanjifa marobe, izay nahatonga ny fisokafan'ny tranonkala loharanom-pahalalana ho an'ny fiaraha-monina. Ho an'ny modely fanontana XNUMXD.
Ity fanangonana ity dia misy ny sasany amin'ny Tranonkala momba ny môdely fanontana 3D tsara indrindra azonao ampiasaina hihaonana amin'ireo mpamorona namanao, hisintomana modely maimaim-poana ary hizaranao ireo tetik'asa noforoninao an-tserasera.
Pinshape dia tsena iray entin'ny fiarahamonina an-tserasera ho an'ny maodely fanontana 3D.
Ny tranonkala dia toy ny a loharano lehibe ho an'ny fisie rakitra STL maimaim-poana, fa izy io koa dia ampiasaina ho tsena fivarotana sy fivarotana rakitra printy 3D. Ny vondrom-piarahamonina Pinshape dia misy maherin'ny 70,000 mpamorona sy mpanamboatra izay manampy rakitra STL vaovao eny an-tsena isan'andro.
Manana endrika isan-karazany ny tranonkala ary manampy ny mpivarotra hampivelatra ny magazay amin'ny alàlan'ny torolàlana maromaro.
Thingiverse dia fantatra amin'ny toerana anaovana tahiry lehibe indrindra ho an'ny maodely fanontana 3D.
Ny tranokala dia natsangan'i MakerBot, ilay orinasa ao ambadiky ny malaza Fanontana 3D Replicator. Ny tranonkala dia manana vondron'olona manam-pahaizana 3D sy manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra izay mandray anjara amin'ny rakitra STL isan'andro. ny Modely fanontana 3D Izy ireo dia manomboka amin'ny endrika fototra ka hatramin'ny zavatra sarotra saro-takarina.
My Miny Factory dia tranonkala iray hafa tsara amin'ny tabilao izay miasa ho toy ny loharanom-pahalalana ho an'ny modely kalitao Fanontana 3D.
Fisie STL dia mizara ho sokajy 15 Manomboka amin'ny lamaody, zavakanto, asa tanana ary kojakoja an-trano izy ireo, hatrany amin'ny gadget, fitaovana elektronika, kojakoja fanampiny ary zavatra bitika.
My Miny Factory manolotra fisie printy 3D kalitao voaporofo noforonin'ireo matihanina. Ny tranokala dia misy modely an-taonina, fa raha tsy hitanao izay ilainao dia azonao atao foana ny mangataka zavatra manokana avy amin'ny mpamorona.
Fanakalozam-barotra NIG 3D Print
Fanakalozam-barotra NIG 3D Print dia sehatry ny fiarahamonina notarihin'i STEM. (Fohy ny STEM raha «siansa, teknolojia, injeniera ary matematika«). Amin'ity tranonkala ity dia mizara sy mizara karazana modely fanontana 3D miavaka izay marina ara-tsiansa sy azo ampiharina ara-pahasalamana ny olona.
Ny fitehirizam-bokin'ny STL dia misy ny prosthetika, ny neurosains, ny modely molekiola, sns.
Trano fanatobiana 3D
3D Warehouse dia a Tranonkala fanontana 3d izay mifantoka amin'ny maritrano, maodely mizana, ary ny famolavolana ny vokatra ary ny zavatra rehetra noforonina tamin'ny rindrambaiko SketchUp.
Manana vondrom-piarahamonina mahafinaritra ny tranonkala ary manana endrika hafa. Izy io koa dia kendrena amin'ireo mpanamboatra te hizara, handefa ary hampiroborobo ny maodelin'izy ireo 3D.
SketchFab dia manana tranomboky mahavariana modely fanontana 3D tena tsara. Ny tranokala dia misy endrika amam-panahy, sary sokitra ary modely samihafa amin'ny endrika STL sy OBJ.
OBJ dia endrika fisie izay manome fampahalalana momba ny loko ho fanampin'ny maodely 3D ary ampiasaina amin'ny fanontana mandroso. Zavatra iray hafa mampiavaka an'ity tranonkala ity ny mpijery maodely 3D manerantany izay mamela fijerena 360 degre feno ny zavatra mivantana avy amin'ny tranokala alohan'ny hisintomana.
Grabcad dia loharanom-pahalalana mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina ho an'ny maodely fanontana 3D izay mikendry ny hanampy injeniera mekanika manamboatra vokatra tsara haingana kokoa.
Ny tranonkala dia miasa ho toy ny fitaovana fiaraha-miasa eo amin'ny mpamorona ary manampy azy ireo hanangana modely 3D miaraka. Manana injeniera iray tapitrisa mahery ny vondrom-piarahamonina izay manavao ny tranomboky misokatra isan'andro miaraka amin'ireo rakitra printy 3D maimaimpoana amin'ny STL sy endrika hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Toerana tsara indrindra hahitana modely fanontana 3D
Ahoana no fomba ahazoana hoditra miaraka amin'ny GIMP na Photoshop?